Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemothorax sy ny pnemothorax | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemothorax sy ny pnemothorax | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fahasalamana / Fitsaboana / Aretina / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Hemothorax sy Pneumothorax
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny hemothorax sy ny pneumothorax dia ny hemothorax dia ny fanangonana ra tsy voatanisa ao amin'ny lavaka pleura, raha ny pnothothorax kosa dia ny fanangonana rivotra tsy ara-dalàna ao amin'ny lava-bolan'ny pleura.
Ny lavaka pleura dia ilay habaka feno tsiranoka manodidina ny havokavoka. Matetika izy io dia hita ao amin'ny thorax, izay mampisaraka ny havokavoka amin'ireo rafitra manodidina azy toy ny tranom-baravarana, ny elanelan-tany, ny mediastinum ary ny diaphragm. Ankoatr'izay, ny lavaka pleura dia rakotry ny fonosana serila misy sosona roa antsoina hoe pleura. Ny lavaka pleura dia hita eo anelanelan'ny sosona pleura visceral anatiny sy ny sosona parietal ivelany. Io lavaka pleura malemy io dia mamela ny havokavoka hifindra malalaka mandritra ny fizotran`ny rivotra. Hemothorax sy pneumothorax dia toe-javatra roa mipoitra noho ny fiangonan'ny ra sy ny rivotra tsy ara-dalàna ao amin'ny lava-bolan'ny pleura.
2. Inona no atao hoe Hemothorax
3. Inona no atao hoe Pneumothorax
4. Fitoviana - Hemothorax sy Pneumothorax
5. Hemothorax vs Pneumothorax amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Hemothorax vs Pneumothorax
Inona ny Hemothorax?
Hemothorax dia ny fanangonana ra tsy mety ao amin'ny lava-volo. Ny soritr'aretin'ny hemothorax dia mety misy fanaintainan'ny tratra, fahasarotana amin'ny fifohana rivotra, fihenan'ny fofonaina amin'ny lafiny voany sy ny tahan'ny fitempon'ny fo. Matetika ny hemothorax dia mitranga noho ny ratra, ny homamiadana manafika ny lavaka pleura, ny fikorontanan'ny rà, ny fisehoan'ny endometriozy tsy mahazatra, valin'ny havokavoka na aretina hafa. Matetika, io aretina io dia azo hamarinina amin'ny fampiasana tara-tratra. Saingy azo hamarinina ihany koa amin'ny alàlan'ny karazana fitsapana sary hafa toy ny ultrasound , CT scan, ary MRI .
Sary 01: Hemothorax
Amin'ny alàlan'ny famakafakana santionany amin'ny tsiranoka, ny fisian'ny rà dia azo avahana amin'ny endrika hafa amin'ny tsiranoka ao anaty lava-bolan'ny pleura. Amin'ny ankapobeny, ny dokotera dia mitsabo ny hemothorax amin'ny alàlan'ny rà mandriaka amin'ny alàlan'ny fantsom-tratra. Raha mitohy ny fandehanan'ny rà dia mety ilaina ny fandidiana. Tena tsara ny vinavina raha voatsabo io aretina io. Na izany aza, misy ny fahasarotana sasany azo jerena ao amin'ny hemothorax, toy ny aretina ao anaty lava-bolon'ny pleura sy ny fananganana tavy misy takaitra, sns.
Inona no atao hoe Pneumothorax?
Ny pnothothorax dia ny fanangonam-be tsy ara-dalàna ao amin'ny vava pleura. Ny soritr'aretina dia mety ahitana fanaintainan'ny tratra maranitra iray tampoka sy fofona fohy. Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny valva tokana dia noforonin'ny faritra misy tavy simba, ary mitombo ny haben'ny rivotra ao amin'ny habakabaka pleura. Ity toe-javatra ity dia antsoina hoe pneumothorax fihenjanana. Ny pneumothorax misy fihenjanana dia miteraka tsy fahampiana oksizenina mihombo sy tosidra ambany. Ny havokavoka roa dia tratry ny pnothothoraks tsy fahita firy. Ity dia antsoina hoe havokavoka nirodana. Ny pnothôtôra spontaneous voalohany dia mitranga tsy misy antony. Na izany aza, ny fifohana sigara dia mampitombo ny fihanaky ny pnothothorph spontaneous. Ny pnothothorostia spontaneous faharoa dia misy noho ny fisian'ny aretina havokavoka misy toy ny aretina pulmonary obstructive maharitra, asma , ary tuberculosis .
Sary 02: Pneumothorax
Matetika io aretina io dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny taratra X-tratra, ny scan CT ary ny ultrasound. Ny pnothothorax tampoka dia mamaha tsy misy fitsaboana. Ao amin'ny pnothothorax spontanina be dia be, ny rivotra dia mety esorina amin'ny alàlan'ny syringe na fantsom-tratra. Takiana ny fandidiana rehefa tsy mahomby ilay tatatra. Ny fitsaboana amin'ny fandidiana dia misy ny pleurodesis sy ny pleurectomy.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Hemothorax sy Pneumothorax?
Hemothorax sy pneumothorax dia fepetra roa noho ny fanangonana ra sy rivotra tsy ara-dalàna ao amin'ny lavaka pleura.
Ireo toe-javatra roa ireo dia mety vokatry ny aretin'ny havokavoka.
Miteraka fanaintainana amin'ny tratra sy fahasembanana amin'ny fifohana rivotra izy ireo.
Ireo fepetra ireo dia azo sitranina amin'ny alàlan'ny rano mandeha tsara.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemothorax sy ny pnemothorax?
Hemothorax dia manondro fiangonan'ny ra tsy ara-dalàna ao amin'ny lava-bolan'ny pleura, fa ny pnothothorax kosa dia manondro fanangonana rivotra tsy ara-dalàna ao amin'ny lava-bolan'ny pleura. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny hemothorax sy pneumothorax.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemothorax sy pneumothorax amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Hemothorax vs Pneumothorax
Ny lava volo dia ny habaka feno tsiranoka eo anelanelan'ny havokavoka sy ny rindrin'ny tratra. Manampy ny havokavoka hivezivezy malalaka mandritra ny fifohana rivotra. Hemothorax sy pneumothorax dia fepetra roa noho ny fanangonana ra sy rivotra tsy ara-dalàna ao amin'ny lava-bolan'ny pleura. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny hemothorax sy ny pnothothoraks.
1. Jewell, Tim. " Hemothorax: famaritana, soritr'aretina ary fitsaboana ." Healthline, Media momba ny fahasalamana, 28 Aog 2017.
2. Nazario, Brunilda. " Pneumothorax (havokavoka): soritr'aretina, antony, Diagnosis ary fitsaboana ." WebMD, WebMD, 12 Jona 2020.
1. " Hemothorax " Nosoratan'i R. Amin sy BH Waibel - (CC BY 4.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. “ Fambara taratra X-ray an'ny pnothothoraks” Nosoratan'i Karthik Easvur - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny COPD sy ny Asthma Fahasamihafana eo amin'ny gout sy ny vanin-taolana Fahasamihafana eo amin'ny Diabetes Insipidus sy Diabetes Mellitus Fahasamihafana eo amin'ny tsy firaikana sy ny fahaketrahana Fahasamihafana eo amin'ny aretina Celiac sy Crohn
Filed Under: Aretina
Fahasamihafana eo amin'ny Microfinance sy Microcredit
Fahasamihafana eo amin'ny Opera sy ny mozika
Fahasamihafana eo amin'ny Calyx Bract involucral sy Indumentum
Fahasamihafana eo amin'ny lohataona sy hibernate
Fahasamihafana eo amin'ny isa R-Factor sy ny MOS amin'ny kalitaon'ny VoIP